Shiya amazwana / Ukutholakala Okutholakalayo, Rescue, Ukukhangisa / By UJudi Omncane / September 10, 2019 October 12, 2019
UMolly, kanye ne-BFF yakhe (umngani omkhulu kunabo bonke) uHerman, impilo yakhe isiphendukele phansi kulo nyaka kuze kube manje! Umnikazi wayo wesikhathi eside waba nezinkinga ezithile zempilo yengqondo ngakho-ke bobabili uMolly noHerman bagcina endaweni yokukhosela eningizimu ye-CA. Umnikazi wabacela ukuthi babuye lapho esezizwa engcono. Kodwa-ke, ngemuva kwenyanga umnikazi waphinda wagula futhi bobabili uKerries wagula ubuyela endaweni yokukhosela futhi, kodwa ubuyelwe “ekhaya” futhi lapho umniniyo ezizwa engcono. Muva nje babuyiselwe endaweni yokukhosela okokugcina njengoba umnikazi wagcina evumile ukuthi uMolly noHerman bazothola ikhaya elisha.
UMolly akasekho endaweni yokukhosela kodwa njengamanje ugqugquzelwa ukunakekelwa kwe-kennel enhle eningizimu ye-CA, ezungezwe abantu abanesihawu nabanothando manje kodwa angathanda ukuthola ikhaya elisha elihle. Ngokomndeni wakhe wokukhulisa izingane, uziphathe kahle izingane emndenini wazo futhi muhle nezinye izinja. UMolly kubikwa ukuthi “uluhlobo lothando” lwangempela futhi kufanele abe yisengezo esihle kunoma yiliphi ikhaya. Yize uMolly, njengentombazane eyintombazane ethandekayo, cishe ethanda ukuthathwa isithombe sakhe njengoba azi ukuthi muhle, asinazo izithombe zakhe ngalesi sikhathi kodwa sizosithumela njengoba sibathola ukuze ubone ukuthi muhle kanjani Ungu! UMolly ucatshangwa ukuthi uneminyaka engu-5 ubudala.
UMolly okwamanje utholakala eningizimu ye-CA kanti imali yakhe yokuthola izingane yi- $ 350 yokusiza ukuthola izindleko zakhe. Isisekelo sizothokozela noma ngabe yimiphi iminikelo yokuqhubeka nokukhokhela izindleko zikaMolly, umngani wakhe uHerman, kanye nezinye izinja zethu zokutakula. Uma ungakwazi ukwamukela, sicela ucabange ukusiza ngokunikela nganoma yisiphi isayizi. Ngiyabonga. Ukuxhumana [Email protected] ukuze uthole olunye ulwazi.